RASMI: Athletico Madrid Oo Lasoo Wareegtay Xiddiga Reer Brazil Ee Cunha – Garsoore Sports
RASMI: Athletico Madrid…
Weeraryahanka reer Brazil, oo sidoo kale lala xiriirinayay Leeds horaantii xagaagan, balse wuxuu mustaqbalkiisa u hibeeyay kooxda heysata horyaalka La Liga isagoo u saxiixay ilaa 2026
Kooxda Atletico Madrid ayaa dhammeystirtay saxiixa Matheus Cunha oo ay kala soo wareegtay kooxda Jarmalka ee Hertha Berlin lacag dhan £ 22 milyan oo ginni.
Goal ayaa werisay horraantii isbuucaan in Atletico ay u weecatay dhanka Cunha kaddib markii ay ku guuldareysteen inay heshiis la gaaraan kooxda Fiorentina oo ay ka doonayeen Dusan Vlahovic, xilli macalin Diego Simeone uu aad u doonayo inuu safkiisa kusoo daro weeraryahan cusub kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga 31ka bishan Ogoosto.
Kooxda heysata horyaalka La Liga ayaa si dhaqso leh ugu guuleysatay inay heshiis hordhac ah la gaarto Hertha oo ku aadan Cunha, kaasoo lagu soo waramayo inay ku jirto in kooxda Jarmalka ay faa’iido 10 boqolkiiba marka lasii iibinayo, iyadoo haatan heshiis la wada gaaray cayaaryahanka reer Brazil-na wuxuu qalinka ku duugay qandaraas shan sano oo Wanda Metropolitano ah.
Cunha oo ilkaha ku heysta billaa dahabka Olombikadii Tokyo 2020 (Getty Images )
Cunha wuxuu qeyb ka ahaa kooxdii Brazil ee ku guuleysatay billada dahabka Olombikada Ciyaarihii Tokyo xagaagan, maadaama uu u ahaa weeraryahanka keliga ah ee joogtada wuxuuna dhaliyay seddex gool shan kulan oo uu ku jiro mid uu ka dhaliyay Spain, kulankii fiinalka.
Maadaama uu haatan kusoo biiray Athletico, Cunha wuxuu wajihi doonaa tartan adag waxayna tahay inuu la tartamo Suarez, Correa iyo Joao Felix si uu boos ugu helo shaxda macalin Simeone.